Maxaa Sababo Xubnha Jirka Inay Bararaan? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Miski Cabdinuur Salal — April 3, 2020
Bararka waxaa u dhacaa marka ay nuudayaasha jirka ama maqaarka hoostiisa ay ku aruuran dheecaano xad dhaaf ah, taasoo saameyn caafimaad daro ku reebto xubnaha jirka sida: Gacmaha iyo Lugaha.
Inta badan bararka waxaa lagu arkaa dadka waaweyn iyo Hooyinka Uurka Leh.
Calamadaha Ka Soo Muuqda Jirka Marka U Bararo Waxaa Kamid Ah:
Xanuun laga dareemo xubinta uu bararka ka jiro.
Culeeska qofka oo siyaada ama luma.
Qofka isku dhex yaaco.
Qofka oo ay dabeecada ka lunta.
Wadna garaaca oo bato.
Cadaadis dhiigga oo sara u kaco.
F.G: Calaamadaha waxa ay ku xiranyihiin hadba wixii sababay bararka.
Maxaa Sababo Bararka Xubnaha?
Shaqada wadnaha oo gaabis ku imaado ama guud ahaaba istaagto,waxa sababtaa bararka xubanaha.
Cudurada ku dhaca killiyaha.
Daawoyinka qaar .
Qanjiro xanuunka. iyo
Xinjirowga xidida dhiigga.
DhibaatoyinkaKaDhashoBararkaHaddiiAan La Daaweyn WaxaaKamid Ah:
Bararka oo gaara xubanaha muhiimka u ah nolosha.
Dhaq-dhaqaaq yari soo food saarto xubinta bararsan
Wareego dhiigga oo si wanaagsan u soo gaari waayo.
Caabuq ku imaado aga-gaarka xubinta bararsan.
Cun cun lagu dareemo maqaarka.
Sidee Ayaa Lagu Daaweyaa Bararka?
Isticmaalka cusbada badan in aan yarenno.
Jimcisi in aan sameynno.
Xubinta bararsan in la dhigo meel sara u soo qaaddeyso, tusaalle: Barkin in la saaro oo xubnaha kale laga sara mariyo, si ay u soo gaarto wareego dhiigga in ku filan.
Fadhiga iyo istaaga badan in la iska illaaliyo inta uu jiro bararka.
Tags: Maxaa Sababo Xubnha Jirka Inay Bararaan?
Next post Sidee Kor Ugu Qaaddi Kartaa Caafimaadka Dheefshiidkaaga?
Previous post Somaliland Maxaa u Diidan Midnimada “Soomaali Weyn”?